About Us - Qingdao Aedis Indwangu imbobo Co., Ltd
Micro Flow Indwangu imbobo
Ukuthuthukiswa Flow Indwangu imbobo
Soft Flow Indwangu imbobo
Amandla Flow Indwangu imbobo
Nozzle Flow Indwangu imbobo
Permeable Indwangu imbobo
Aedis Indwangu imbobo imiklamo ayothengisa yendwangu ukupholisa izinhlelo (ezaziwa ngokuthi Indwangu Amapayipi / imbobo amasokisi / sox) ukuze enze uhlaka-free emoyeni wokusabalalisa kukho konke izinhlobo amakamelo kanye nezicelo.
Aedis Indwangu imbobo wayengomunye walaba abakhiqizi Indwangu imbobo wokuqala owasungulwa ngo-2003 futhi kusukela ngaleso sikhathi siye sakhula saba kwekulu Indwangu imbobo nomkhiqizi e China.
Aedis Indwangu imbobo itholakala ku Qingdao, China ne ifakwe software eziphambili ukubala ukukuvumela onjiniyela yayo abanolwazi akwazi isixazululo kanye ukunikela okungcono technical support embonini indwangu imbobo. Leli hhovisi yasungulwa ngo 2003 futhi kusukela ngaleso sikhathi uye ngempumelelo ukunweba ukumbozwa wayo umlibe phakathi China, futhi kusukela 2012, siqale ukuthekelisa Indwangu yethu emoyeni imbobo emhlabeni wonke ngokusebenzisa Abamele ezinye HVAC Manufacturers '.
Sisebenzisa isofthiwe nokuphathelene 3d ukuklama uhlelo lwakho emoyeni ukuhlakazwa. Kungakhathaliseki yinkimbinkimbi design izinga yethu izinqubo Ukuqinisekisa ukufezwa eziqondiwe ngesikhathi. Ukuzivumelanisa nezimo Technical kohlelo kuhlanganiswe izici zemvelo kanye nezinzuzo kwezomnotho kukhona nje ezinye zezizathu ezenza yethu uhlelo emoyeni ukuhlakazwa iye yatha- ne abaklami, abathuthukisi kanye nabezinkontileka emhlabeni wonke, ngokuvamile ukuguqula ezivamile ababephelezela metal indwangu izinhlelo. Noma yini kungenziwa metal kungenziwa indwangu.
Indwangu emoyeni ukuhlakazwa liyingxenye nokukhula masinya. Imvelo engasindi uhlelo FabricAir sika kwenza kube ekahle eziningi izicelo kuhl. izakhiwo zesikhashana ezingaqinile, like ematendeni amahholo embukisweni, futhi retrofitting izakhiwo ezikhona kakade. Izimfanelo anti-ezonakalisayo ukwenza kube sezithandwa kakhulu kwezemidlalo Arenas, natatoriums, emakhishini ezimbonini hhayi okungenani Ukupholisa umnkantsha izicelo, lapho ezivamile ababephelezela metal amaphutha eziphawulekayo. I izakhiwo zenhlanzeko kanye ukhetho anti-microbial kwenza kube baphakame okulungisa ukudla, Isitoreji ukudla izicelo bezokwelapha. Futhi induduzo owenziwa Bespoke ukugeleza onobuhle ukwenza sezulu zasendlini siphakeme kunabo bonke abanye ezivamile metal izinhlelo.
Ukusebenzisa Indwangu ababephelezela kusho ukwakha uhlelo emoyeni ukuhlakazwa nanoma yimuphi engeli, iyiphi ubude futhi iyiphi diameters oyifunayo. Azikho ukulinganiselwa uma kuziwa izindololwane, reducers futhi uthathe-offs. Noma yini ayezokwenza ababephelezela metal kungenziwa indwangu, bese ezinye. Njengoba Indwangu ababephelezela akuyona ezonakalisayo, kukhona eziningi izicelo lapho Indwangu emoyeni ukuhlakazwa izinhlelo njengabakhulu kunani ezivamile ababephelezela metal. Amapayipi Indwangu mancane ezinomsindo, ukufingqa khulula nesisindo yingxenye encane kuphela ababephelezela metal.
Imbobo imibala kungenziwa afaneleke ingaphakathi design scheme futhi kungenzeka ukuphrinta amalogo okwengeziwe evele. Amapayipi Lingase alethwa ekhethekile enamathela isib uwoyela oxosha, impatho anti-microbial, impatho anti-static nokunye. Funda kabanzi mayelana nohlelo lwethu enemisebenzi ohlelweni design.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe Indwangu izinhlelo phezu ababephelezela metal izinga okusezingeni eliphezulu wenduduzo umhlali zokuzamazama umoya. Ukusebenzisa Indwangu ivumela uhlelo unjiniyela ukudala ekahle ukugeleza imodeli nganoma yisiphi isikhala esinikeziwe kungekho okusalungiswa, kungekho ukufingqa, kungekho msindo futhi akukho esishintshashintshayo efile. Okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi usebenzisa FabricAir ukuhlakazwa izinhlelo abandayo umsebenzi izindawo has inzuzo wanezela sezinsuku ogulayo ezimbalwa phakathi abasebenzi, kanye nemvelo anti-ezonakalisayo nokungokwempilo kohlelo ababephelezela kwenza kube aphakeme izindawo ezibandayo kanye okokuqandisa ezifana inyama processing izitshalo.
Indwangu emoyeni ukuhlakazwa izinhlelo Baziwa nangokuthi yendwangu ukupholisa izinhlelo, Indwangu Amapayipi, imbobo amasokisi, noma sox, futhi idume ngomtapo eguquguqukayo kanye core imihlomulo yawo njenge okusalungiswa-free, ukufingqa-free, noiseless, ukugqwala-free futhi ihlanzekile. FabricAir ukuhlakazwa izinhlelo ukumboza anhlobonhlobo izicelo kuhl. ukudla, ezemidlalo, Industrial, okudayisa kanye nezindawo zomphakathi, imfundo, amahhovisi kanye induduzo jikelele, futhi umkhakha wezokwelapha. Funda kabanzi mayelana izicelo.
Ikheli: Isakhiwo B6, Lingang No.1 Road, Huangdao District, Qingdao, China, 266500